भारतसँग वार्तामा बस्दा छुटाउनै नहुने दुई प्रमाण ! «
Published : 1 June, 2020 6:14 pm
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली -महाकाली) अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी हो भन्नुका विभिन्न तथ्यहरू छन् । त्यसैका आधारमा नेपाल सरकारले जेठ ८ गते महाकालीवारिका अतिक्रमित भू-भाग समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । निशान छापमा यो सही नक्सा राख्न संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ।
एक दर्जनभन्दा बढी पुराना नक्साले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाल स्पष्ट देखाउँछ । यीमध्ये पनि दुईवटा नक्सा बढी महत्वपूर्ण छन् । यी दुई नक्साले लिम्पियाधुरामा मुहान भएको नदीलाई काली भनिएको मात्र छैन, दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि यही हो भनेर स्पष्ट देखाएको छ । तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डियाको ‘दि सिभिल एण्ड मिलिटरी स्टेसन्स‘ द्वारा प्रकाशित नक्सामा नेपाली भू-भागलाई कालो र भारततर्फको भागलाई हल्का रातो रंगले देखाएको छ । नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली (महाकाली) भनेर स्पष्ट देखाएको छ ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा ‘काली -महाकाली) नदी पश्चिमका भू-भागमा नेपालका राजाले दाबी गर्ने छैनन्’ भनिएको छ । १४ भन्दा बढी नक्साले गुन्जी, नाबी, कुटीलाई कालीवारि नेपालभित्र देखाएको छ । भूगोलका प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनाल भन्छन्, ‘भारतसँग वार्तामा बस्दा नेपालले छुटाउनै नहुने प्रमाण हुन् यी दुवै नक्सा ।’
बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि कोरोना संक्रमण परीक्षण गराएर संसद बैठकमा सहभागी भएका १६ जना सांसदले
नायक सविन श्रेष्ठ निर्माता रहेको चलचित्र ‘हिरो रिटर्न्स’ निर्माण भएको केही बर्ष भयो । तर,
काठमाडौं । दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका १० जना आइतबार डिस्चार्ज भए ।